Ongoti baxwayisa ngama-side effect ama-ARV | News24
Ongoti baxwayisa ngama-side effect ama-ARV
Cape Town – Ongoti abasebenza ngesibindi somuntu base-University of Cape Town sebethole ukuthi kumana-side effect angajwayelekile alimaza isibindi kulabo abathatha ama-ARV.
I-Efavirenz ayivamile ukuthi ilimaze isibindi, kepha kunesibalo sabantu abasebancane – ikakhulukazi abesifazane – abadla ama-ARV abangaba sengozini yale side effect.
Uma le side effect inganqandwa ngokushesha, ingaholela ekushoneni kwalowo othintekayo.
I-UCT ikhiphe isitatimende yathi lolu cwaningo lwenzelwe ukuthi odokotela babe mehlomane, baqaphele uma kukhona okungahambi kahle ezigulini zabo ezithatha imishanguzo yokuthithibalisa igciwane lesandulela ngculazi.
OLUNYE UDABA: Ezintsha ngama-ARV kwabanesandulela ngculazi
Nokho-ke ongiti baxwayise umphakathi ukuthi ungatatazeli.
USolwazi Francois Venter‚ oyisekela likamqondisi weReproductive Health and HIV Institute‚ eWits, uthe: “Le side effect ayejwayelekile, kepha kumele iqashelwe. Ngenhlanhla abezempilo basheshe bayibalule ezigulini.”
Thola umbiko ophelele kuSowetan.